Enza izwi lakho lizwakale | News24
Enza izwi lakho lizwakale
INTANDO yeningi eyafika neqembu likaKhongolose ngo 1994 yanika wonke umuntu waseNingizimu Afrika ithuba eliyingqayizivele lokuthi asebenzise ivoti lakhe ukuveza umbozo wakhe. Isisho sithi “ivoti lakho liyizwi lakho”. Kuyiqiniso impela ngoba ilo Kanye ivoti lakho osho ngalo ukuthi ubani omukumele angene emandleni kuhulumeni.
Umsebenzi awupheli ngokuvota nje kodwa uyadlulela ekutheni uyalilusa yini lelovoti lakho ngokuqinisekisa ukuthi loko okumele kwenziwe kuyenziwa. Abantu qobo lwabo banguhulumeni. Yingakho kumele baphumele obala bakhulume ngaloko abafuna ukuthi kwenzeke emiphakathini yabo.
Lesisikhathi kuhulemeni wasemakhaya yisikhathi sokuhlela isabelo mali sonyaka omusha. Unyakamali wethu uphela ngo June uqale ngo July wonyaka omusha. Kumanje siphume uchithisaka singuMasipala waseMzumbe ohlelweni lwezimbizo zikaMeya ezaziwa ngokuthi IDP Budget Roadshows. Izo Kanye lezimbizo ekumele wena njengesakhamuzi sazeMzumbe okumele ufike usho ukuthi yini kahle hle oyidingayo. Kumele basebenzise izwi labo ukukhuluma nathi njengoMasipala ukuthi nhloboni yentuthuko abayidingayo endaweni yabo. Loko kuzokwenza ukuthi imali ekhona sikwazi ukuthi siyaba kanjani.
Zikhona izinhlelo ezithatha iminyaka ukwakhiwa njenge Nkanini Indoor Sports Centre, Ntelezi Msani Heritage Centre okungukuthi isabelo mali sazo lezizakhiwa zifakiwe ezinhlelweni zeminyaka.
Bese kuba khona imigwaqo, amaholo, amabhuloho nokunye okuyintuthuko ekumele sikwakhe ezindaweni iyona le esifisa ukuthi basethulele. Ikhona lapho futhi sizothola khona ukuchezeleka ngezinto esasizicelile phambilini kodwa esingakaziboni. Sizokwazi ukuthi kwenzakalani ngazo.
Leli ithubo lokukhuluma ngqo nohulumeni umubheke ezinhlamvini zamehlo usho loko okukushisayo ngaphakathi. Imicimbi yethu ihamba ngamaqoqo (cluster) amawadi. Bheka ukuthi iza nini ngakini. Xhumana neKhansela lakho ngezinto zokuhamba.
Usuku Indawo Isikhathi Amawadi
23 March Ward 17/MPCC 9:30am 17
31 March Ndunge Grounds 9:30am 16
1 April Magwaza Grounds 9:30am 09
5 April Nguza Hall 9:30am 02
6 April Bhanoyi Hall 9:30am 07